Xildhibaan Ahmed Macalim Fiqi oo ka hadlay xilka wasiirnimo ee loo magacaabay – Kalfadhi
Xildhibaan Ahmed Macalim Fiqi oo ka hadlay xilka wasiirnimo ee loo magacaabay
Xildhibaan Ahmed Macalim Fiqi, ayaa dhawaan kasoo muuqday Golaha Wasiiradda ee maamulka Galmudud ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Axmed Qoor-Qoor.
Xildhibaanka oo hadda kamid ah Golaha Shacabka, ayaa loo magacaabay wasiirka amniga ee maamulkaasi. Dad badan ayaa siyaabo kala duwan u hadal hayay xildhibaanka in uu kamid noqday golaha.
Halkan ka akhriso war-saxaafadeedkii uu soo saaray xildhibaanka.
Reer Galmudug nooc kasta oo ay leeyihiin, meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay “Lama huraan waa halkii laga yimid iyo Galmudug, dhankaygana way ka bilaabatay” ma jiro horumar ka imaanaya meel cidlo ah, deegaan walbaana qiimihiisu wuxuu le’eg yahay inta ay le’eg yihiin dadka waxgalka ah ee ka shaqaynaya horumarkiisa.
Muqdisho, 25 Abriil 2020
Xaliimo Yarey “Doorashooyinkii dalka soo maray ma jirin mid wakhtigeeda lagu qabtay”